नार्कोनन सफलताको भिडियो - जारा एस.
पहिले कलेजमा साथीहरूसँग गइन्थ्यो लागुपदार्थ लिइन्थ्यो।
त्यही बेलामा पहिलोपटक कोकिन लिइयो।
पहिलोपल्ट एउटा पार्टीमा एकपटक स्वाद लिऊँ न त भनेर यसको प्रयोग सुरू भयो। त्यसपछि के भयो थाहा छ? म त आफ्नो दैनिक कामकाजहरू गर्न जस्तै आफुलाई बिउँझै राख्न, दैनिक विद्यालय जान, विद्यालय पछिका कार्यक्रमहरूमा जान, घर आउन, पढाई गर्न आदिका लागि पनि कोकिनकै सहयोग लिन थालेछुँ।
त्यसपछि दिनहुँ मादकपदार्थ पिउन थाले।
म दिनमा एक बोतल ह्विस्की पिउँथे होला।
मैले यो सबै विद्यालयबाट नै सुरू गरेको थिए र विद्यालय जान पनि बन्द भयो, र विद्यालयमा असफल हुन थाले।
त्यसबेला यो नाचगान जस्तै थियो। अनि बुबाले नार्कोनन बोलाउनुभयो। १२ घन्टापछि म त्यहाँ पुगे।
कार्यक्रम गर्दै जाँदा ममा केही परिवर्तन भएजस्तै भयो। अनुभव र अनुभूति गर्न गर्न थाले र म नियन्त्रित थिए। यसले साँच्चिकै सशक्त बनाउँदै थियो।
कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि म फेरि स्कुल जान थाले र डिग्री पूरा गरे। ए श्रेणीमा ग्रेजुएटका दुवै सेमिस्टर पूरा गरे, त्यतिबेला त मैले काम गर्न थालिसकेको थिए। यो सबै मैले आफ्नै क्षमताले गरेको हुँ।
नार्कोननले मलाईं जीवन संघर्षको शक्ति दियो।